घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू डेविड जप्पाकोोस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
LB एक फुटबल स्टार को पूर्ण कहानी प्रस्तुत छ उपनाम द्वारा सबै भन्दा राम्रो परिचित; 'गर्जन'। हाम्रो डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईं आफ्नो बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाता छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो प्रतिभाशाली दाँया फिर्ताको बारेमा जान्दछ तर केहिले विचार गर्दछ डेविड जप्पासास्टा जीवनी कथा जो धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
डेभाइड जप्पोस्टेस्टएक जून 11 को 1992th दिन मा पैदा भएको थियो सोरा शहर, फ्रान्सिनोन प्रान्त, इटालीका अभिभावक, श्रीमती र श्रीमती रोबर्टो जाप्पाकोस्टा द्वारा।
उही उही ऐतिहासिक शहर सोरा, दक्षिण-मध्य इटालीको कम्यूनमा हुर्किएको थियो Lazio जहाँ प्रसिद्ध एसएस लाजियो फुटबल क्लब अवस्थित छ। डेभिडका बाल्यकालको जीवनदेखि नै उनीहरूका सहयोगी अभिभावकहरू थिए। ऊ सोराको प्राथमिक विद्यालय प्रणालीबाट गुज्र्यो। यद्यपि यस समुदायको सबै बासिन्दाहरूले यसको महत्त्व राख्नु भए पनि शिक्षा वास्तवमै उसको बोलावट थिएन।
फुटबलको लागि डेभाइड प्रेम उनको शहर र एसएस लाजियो फुटबल क्लब बीचको निकट लाभबाट उत्पन्न भयो। उनी धेरै थोरै बच्चाहरू मध्ये एक थिए जसले केवल फुटबल क्लबको भ्रमण गरेनन्, तर क्लबका उल्लेखनीय फुटबलरहरूको जातहरूमा पनि रस देखाए।
To देखि १२ वर्ष (वर्ष १412 - - २०० -) बीच, डेभिडले मात्र साक्षी दिएनन्, तर एसएस लाजियोको उल्लेखनीय नामहरूबाट धेरै कुरा सिके। उनी एसएस लाजियोमा निश्चित समय रेखाहरूमा खेल्ने उल्लेखनीय व्यक्तिहरूलाई अनुसरण गर्ने प्रशंसक थिए। तिनीहरूले समावेश छन्; एलेसेन्ड्रो नेस्टा (१ 1996 2007 -1993 -२००२), जाप स्ट्याम (२००१ - २००)), हर्नोन क्रेस्पो (२०००–२००२), रोबर्टो मन्सिनी, सलास मेलिनाओ (१ –––-२००१), सेबास्टियन भेर्न (१ 2002 2001 - - २००१), पाभल नेद्वाड (१ 2004 2000 - - २००१) , क्लाउडियो लोपेज (२००० - २००)) र क्रिश्चियन भिअरी (१ 2002 1998 - - १ 2001 1999।)।
यी नामहरूले फुटबलमा उनको रुचि को कारण संकेत गर्‍यो। उनले विभिन्न स्थानहरू खेल्ने आफ्ना असंख्य मूर्तिहरूको प्रेमको मिश्रणले खेलको क्षेत्रमा आज आफ्ना गुणहरू परिभाषित गरेका छन्। उनका बाबुआमाले सोराको युवा फुटबल प्रणालीमा दर्ता गरेर उनको फुटबल सपनाको अनुसरण गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरे। आईडी कार्ड तल देखाइएको छ।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: क्यारियर सारांश
डेविड जप्पासास्टा उनीहरूको जवान क्यारियरका दिनहरू सही दायाँ उपयोगिता भूमिका खेल्न छनौट गर्छन्। डेविड जप्पाकोस्टाना युवाहरूले फुटबल झण्डा (दाँया फिर्ता) को नजिकै खेल्न मनपर्ने एक व्यक्तिलाई प्रदर्शन गर्दछ।
डेभिड जप्पाकोस्टाको युवा क्यारियर - अनटोल्ड स्टोरी।
उहाँ सधैं एक हुनुहुन्छ जसले रक्षा गर्दथ्यो, आक्रमण, सहयोग, लम्बाई र माथिको लम्बाई सबैले गोलको संभावना सिर्जना गर्दछ।
Zappacosta ग्रेस टु ग्रेसको स्टोरी।
15 को उमेर मा, उनी 2011 मा प्रसिद्ध अटलान्टा अकादमी मा शामिल हो गए पछि उनको शहर को सागर स्थित जहां उनको देशी क्षेत्र मा युवा फुटबल मा एक निशान बनाउन पछि।
तिनीहरूले उहाँलाई एभेलिनले कम लीग पोशाकमा ऋण लिए। जब दक्षिण एसियाली वसन्त 2013 मा सेरी बी को लागि पदोन्नति जीता, जेप्पास्टा ने विजयी को तारीख (5-5-2013) को साथ आफ्नो हात को टैटू गरे। उनले अटलान्टा द्वारा सम्झना गरे र 29-2014 मा 15 लीग गेम्स खेले, तीन पल्ट स्कोर।
टोरिनो अटलान्टामा उनको राम्रो फुटबलबाट प्रभावित भए र २०१ 2015 जुलाईमा, उनीहरूले मिडफिल्डर डानिएल बासेलीलाई संयुक्त रूपमा m paid मिलियन तिरे। तपाईं, एक रिपोर्ट £ 7m Zappacosta को लागी थियो। तोरोको चालक मालिक अर्बानो क्यारोले केही भन्न सकेन जब चेल्सीले uc २m मिलियनको दाहिने पछाडि बुक्नेरिंग प्रस्ताव गरे। उनले मा चार वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे स्टामफोर्ड ब्रिज सँगृ डैनी पिटर वाटर। Chelsea मा Zappacosta मजदूरी £ 45000 छ। यो साप्ताहिक मजदूरी औसत केर्सेस्सी एफसी प्लेयर प्राप्त भएको तुलनामा कम छ। ट्राफिकसञ्झ्याल अन्तिम समयको म्यादमा बन्द हुनुभन्दा केही मिनेट पूरा भयो।
डेभिड Zappacosta @ चेल्सी।
बाँकी रहेका उनीहरूको इतिहास इतिहास हो।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
यो डेविड जप्पासास्टा पारिवारिक जीवन सोरा मा अनुपम छ। यो त्यस्तो परिवार हो जुन सँधै मेहनतको साथ उनीहरूको सपनाको अनुसरण गर्नमा विश्वास गर्दछ। उनका दुबै बुबाआमा एक पटक मध्यम आय वर्गमा संचालन गर्थे। उनीहरू फुटबलमा छोराको सफलताका लागि अवकाश लिनु भन्दा पहिले धेरै बर्ष पेपर मिल निर्माणमा बचिए।
डेभिड Zappacosta अभिभावक र पारिवारिक जीवन - श्रीमती र श्रीमती रोबर्टो Zappacosta।
अनुसार विकिपीडिया, The डेविड जप्पासास्टा परिवारले मात्र उल्लेखनीय सोरा परिवारलाई आफ्नो बच्चाहरू फुटबलमा उत्कृष्ट रूपमा देखेका छन्। उहाँसँग तल चित्रित फिबोइ जप्पोस्टेटा नामको एक ठूलो भाइ छ।
डेभिड Zappacosta भाइ- Fabio।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सम्बन्ध जीवन
यो Zappacosta जीवनी उहाँको प्रेम जीवन बिना पूर्ण छैन। उसको एक केटी छ जसलाई उसले पहिलो दिनदेखि आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिन्छ। डेभिड जप्पकोस्टाकी प्रेमिका मोरेना उरझिनी (तल चित्रमा) उनको बाल्यकालदेखि नै उनको जीवनको प्रेम रहेको छ।
Zappacosta Morena प्रेम कहानी।
विपरीत Henrikh Mkhitaryan, डेभिडले आफ्नी पत्नीको छनौट wife० बर्षको उमेरमा हुनु पर्छ जस्तो महसुस गरेन। उनी उनको किशोर अवस्थादेखि नै उनको प्रेममा रहेको छ।
डेभिड Zappacosta प्रेमिका र पत्नी हुन।
डेभिड जप्पकोस्टाको जीवन फुटबल मैदान बाहिरको जीवन मात्र उनको प्रेमिका, मोरेना उर्जिनीसँगै बित्यो। यस अनुसार सूर्य, Zappacosta अब उनको सपना जीवित छ।
डेभिड Zappacosta सम्बन्ध जीवन।
उहाँ बस्नुहुन्छ Zappa Life उनको सपना प्रेमिका / पत्नी संग (मोरना) को आफ्नो सपना क्लब (चेल्सी एफसी) र सपना कोच (एन्टोनियो कन्टे) मा।
डेभिड जप्पकोस्टाको प्रेम कहानी यस्तैसँग मिल्दोजुल्दो छ रोबर्टो फर्मिनो, एलेक्स ओक्सलेड चेम्बरलेन र मार्कस राशफोर्ड। धेरै कुराको विपरीत एंथोनी मार्शल र एडिंसन काभनी र Cesc Fabregas.
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पहिलो लक्ष्य तथ्य
उनले आफ्नो पूर्ण शुरुआत गरे र 12 सेप्टेम्बर 2017 मा चेल्सी को लागि आफ्नो पहिलो लक्ष्य बनाए, एक 6-0 घर को बिरुद्ध जीत Qarabağ FK, च्याम्पियन लीग को उद्घाटन समूह मा।
यो प्रतिस्पर्धामा इटाली खेलाडीले जित्यो भने यो एक्सएनएमक्सक्स गोल थियो।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: चेल्सी र एंन्थोनिया Conte को लागि प्रेम
31ST अगस्ट अगस्ट चेल्सी नयाँ केटा, 2017 ले ब्लूहरूको लागि एउटा योजना बनाएको हुन सक्छ तर उनले मई मा पुनः च्वाइस एफसी जित्ने ट्वीटरको साथ लन्डनको क्लबमा जाने प्रयास गरे।
उहाँले पनि यो भन्नुभयो "मेरो लागि एक सपना चेल्सी मा शामिल हुन को लागि सपना" उनको सम्झौता पछि समाप्त भयो।
एन्टोनियो कोन्टेको सम्बन्ध Zappacosta - इटालियन चक्कर।
यो पनि साधारण मान्छे को लागी हुन सक्छ (एंथोनियो Conte) कि उनले वरिष्ठ फुटबल को आफ्नो पहिलो स्वाद दिए। एन्टोनियो कन्टे यूरो-30 को लागि उनको अस्थायी 2016-म्यान को लागि डिफेंडर को नाम ले।
तिनी तीन रिजर्व खेलाडीमध्ये एक थिए जुन विशेष रूपमा खुल्ला घर पछि घर फर्किन्छ, तर कथा अनुरोध गरे कि वे एक वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय को रूप मा आफ्नो पहिलो अनुभव को अवशोषित रहन। अवसरबाट, त्यो देशमा नियमित रूपमा भएको छ।
यो पनि समझाएको छ कि उहाँले किन पुन: साझेदारी गर्नुभयो एन्टोनियो कन्टे लन्डनमा प्रिमियर लिगको पहिलो नमूना प्राप्त गर्न।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उहाँको शक्ति
क्रसिंग उनको बुला कार्ड हो। डेभिड नामकरण डेभिड बेकखमको कक्षामा नहुन सक्छ, तर उसको ह्वेल-कर्लिंग क्रसहरू संदेह छैन, इङ्गल्यान्ड किंवदंतीको एक सम्झना।
अधिक, उसले उन्नत प्रविधिहरू वितरण गर्दैन Osmane Dembele र गब्रिएल यीशु, तर सँगै समानता शूटिंग गरेको छ लेरोया सेन। यसैले उनलाई उपनाम 'थन्डरबोल्ट' भनियो।
उनको शूटिंग र क्रॉस स्वर्ग बाट मन्ना मनपर्छ। Zappacosta एक छ जो बल संग जुम गर्न इच्छुक र सबैभन्दा बलियो मध्य संरक्षक को बीचमा छ। Andrea Belotti टोरोनो मा लाभार्थी थियो, र यस दिन को लागि, अल्भारो मोराटा फाइदाहरू।
Zappacosta पनि जस्तै ऊर्जा को थलो छ Bakayoko र एक राम्रो शट। उसले चार वा पाँच मानिसलाई रक्षामा वाल वा चल्न सक्छ। ती विकल्पहरू, र उनको कडा परिश्रम गर्ने, उनीहरूलाई ब्लुजका लागि उत्कृष्ट अधिग्रहण बनाउनुहुन्छ। उसले सुपरस्टारको नैतिकताको काम पाएको छ तर एक खुट्टा सैनिकको अहंकार।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उहाँको कमजोरी
यद्यपि, यो पूर्ण-ब्याक आक्रमणको बारेमा एक सामान्य क्लिच हो। Zappacosta एक हो जसको ओवरलैपिंग प्रवृतिले आफ्नो टोलीलाई कष्ट बनाउँछ जब विपरीत पक्ष काउन्टर आक्रमण गर्छ।
यसैले उनले चेल्सी जस्तै एक टोली को रुचि राख्छ जसले पाँच मान्छे को रक्षा गर्दछ।
Zappacosta को अनुसार: “जब तपाईं चार जना पछाडि लाइनमा खेल्नुहुन्छ तपाईले बढी बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्दछ र बढी ध्यान दिन जरुरी छ। म पाँच-मानिस रक्षा रुचाउँछु किनकि यो मेरो खेल सूट गर्दछ। त्यहाँ धेरै कभर छैन। यसमा तपाईले विपक्षीको समस्यालाई तल झार्नु बाहेक प्रत्येक परिस्थितिमा ध्यान दिनु पर्छ "।
उसलाई क्रेडिट दिने, इटालीले चेल्सीमा प्रगतिको लक्षण देखाउँछन्। वास्तवमा, विश्वव्यापी भान्साहरूमा प्रतिवादी रक्षाकर्ताहरूलाई परिवर्तन गर्ने एक मास्टर हो। लियोनार्डो बोनुको लाइनको विकास भनेको के जिपापोस्टाको हो।
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:विक्टर मोशाको लागि प्रतियोगिता
जब डेभिड जप्पाकास्टोले कुरबागमाथि विजय हासिल गरे उनको चेल्सीको लागि पहिलो सुरुवातमा प्रभावकारी प्रदर्शन प्रदान गर्यो, विक्टर मोशा तुरुन्तै आफ्ना टोलीका इटालियनको प्रदर्शनको सम्झना थियो। यो जब Zappacosta त्यो शाम को लक्ष्य स्कोर गर्न देखा पर्यो जब 30 गर्ड देखि उनको शट नेट मा उतारे।
Zappacosta बनाम मोशा।
र चेल्सी डगआउट मा जंगली उत्सव को समयमा, डेविड लुइज र विली कैबालोरो संग मजाक देखिए मोशा, सम्भवतः उसलाई भन्दै कि कोन्टेको दाहिने पट्टिमा उसको दिन Zappacosta को गर्जन पछि गन्न सकिन्छ। इटालीको अन्तर्राष्ट्रिय गोलले चमक हटायो स्वीकार गरेर उनको प्रयास क्रूस थियो.
अब प्रश्न (विचारको लागि खाना) यो जस्तो हुन्छ; Zappacosta र मोशा, अझ राम्रो छ?
डेभिड जप्पाकोस्टा बनाम भिक्टर मोसेस - को छ?
डेविड Zappacosta बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सोरा स्पोर्टिङ हीरो
अन्ततः हाम्रो डेभिड जप्पाकोस्टा तथ्यहरू उनको गृहनगर, सोरामा एक खेल नायकको रूपमा मान्यता हो। शनिबार, जून १,, दिउँसो ११ बजे सोरा शहरको कन्जर्वेटरी हलमा उक्त सहरका नायकहरूका लागि एउटा समारोह थियो। उनीहरूले खेलकुद मेरिट पुरस्कार डेभिड जप्पाकोस्टालाई उनको बढ्दो प्रतिभाको लागि स्वीकृति प्रदान गरे। अवार्ड Zappacosta रोबर्टो Cirelli, आफ्नो पूर्व सोरा Calcio युवा प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
डेभिड जप्पकोस्टा टाउनशिप पुरस्कार।
त्यो एक गहना चूहा जस्तो देखिन्छ।
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 31